Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » War Deg Deg Ah » Isbeddellada Socdaalka Caalamiga ah ee Aasiya-Pacific
Fududeynta xayiraadaha safarka ee guud ahaan Asia-Pacific (APAC) waxay keentay koror cad oo ballan-qaad ah, marka loo eego xogta Trip.com. In kasta oo dib-u-soo-nooleynta qaybta safarka iyo dalxiiska Aasiya ay ku kala duwanaan doonaan suuq kasta, calaamadaha dhiirigelinta ee dib u soo kabashada ayaa bilaabaya inay soo baxaan, maadaama xannibaadaha la yareeyay oo xuduudaha ay dib u furmeen gobolka oo dhan.
Warbixin dhawaan ka soo baxday Ururka Safarka Aasiya ee Baasifiga (PATA) ayaa saadaaliyay in soo-booqdayaasha caalamiga ah ee imanaya Aasiya ay kori doonaan 100% inta u dhaxaysa 2022 iyo 2023, maadaama baahidu ay kor u kacdo ka hor intaysan ku soo laaban heerarka kobaca caadiga ah muddo ka dib. Tirokoobkii ugu dambeeyay ee laga helay xaqiiqdii waxay taageerayaan saadaashan. Laga soo bilaabo Abriil 1 ilaa Maajo 5, wadarta dalabaadka lagu sameeyay mareegaha gobolka APAC ayaa koray 54% sanadba sanadka ka dambeeya, koror weyn oo ku yimid tirooyinka Maarso (taasoo muujineysa koror 22% sanadba sanadka ka dambeeya).
Marka la falanqeeyo tirooyinka ugu dambeeyay, waxaa cad in korodhka kalsoonida macaamiishu ay si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayso qaybta, iyada oo suuqyo badan oo Aasiya ah ay arkeen kor u kac ku yimid ballan-qaadyada.
Taylaan: Booqashadu way korodhay ka hor xilliga sare
Thailand waxay sii waddaa inay tirtirto xannibaado badan oo dhanka socdaalka ah. Laga bilaabo Maajo, waddanku uma baahna soo-booqdayaasha caalamiga ah ee si buuxda u talaalan si ay u qaataan baaritaanka COVID-19 ka hor inta aysan duulin, ama marka ay yimaadaan.
Sida xaddidaadda u fududaato, ballan-qaadyadu way sii kordhayaan. Bishii Abriil, guud ahaan ballan-qaadyada (ay ku jiraan duullimaadyada, hoyga, kirada baabuurta iyo tigidhada/touryada) waxay ahaayeen 85% sannadkiiba 73% goobta shirkadda ee Thailand. Ballanqaadka duulimaadyada kali-taliska ah ayaa kordhay 130% sanadba sanadka ka dambeeya, iyada oo la qabsiga hoygu aad kor ugu kacay, XNUMX% sanadba sanadka ka dambeeya.
Jimcihii Abriil 22, maalintii Thailand ay ku dhawaaqday in tijaabooyinka COVID-19 ee dadka safarka ah ee si buuxda u tallaalan aan loo baahnayn, tirada isticmaaleyaasha ee daawata hoteellada maxalliga ah ee dalka ayaa kordhay 29% (marka la barbar dhigo tirooyinka Jimcihii hore), halka gudaha Booska duulimaadyada ayaa kordhay ku dhawaad ​​20%.
Sida laga soo xigtay warbixinadii dhawaa, Maamulka Dalxiiska ee Thailand ayaa rajeynaya inuu soo jiito in ka badan hal milyan oo socdaal ah bishii inta lagu jiro xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo booqdayaasha lagu dhiirigeliyay inay iskood u maamulaan tijaabooyinka antigen inta ay joogaan halkii ay karantiil ku ahaan lahaayeen hoteel. Bishii Abriil, dalxiiska soo galitaanka ee Thailand wuxuu inta badan ka yimid Kuuriyada Koonfureed, Singapore, iyo Cambodia iyada oo ay kor u kaceen macaamiisheeda meelo fogfog oo la filayo bilaha soo socda.
Hong Kong: Dib u Bilaabashada Dalxiiska Maxaliga ah
In kasta oo Hong Kong ay dhawaan la kulantay mowjad shanaad oo masiibo ah, tani waxay sii waday inay hoos u dhacdo bishii Abriil, iyada oo socdaalo badan oo maxalli ah ay dib uga bilaabeen magaalada iyo xannibaadaha jahawareerka bulshada oo fududaaday.
Deganeyaasha Hong Kong waxay si aad ah u sugayaan ku soo laabashada nolosha caadiga ah, iyadoo xeebaha iyo barkadaha lagu dabaasho ay dib u furmayaan 5-ta Maajo, iyo baararka, meelaha lagu caweeyo, qolalka karaoke iyo safarrada dalxiiska ee dib u bilaabaya howlahooda 19-ka May.
Xogtu waxay taageertaa calaamadaha dhiirigelinta ee soo kabashada suuqa, iyada oo boosaska hoyga maxalliga ah ee bisha Abriil ay kordhayso 6% sannad kasta. Waad ku mahadsan tahay nasashada dheeraadka ah ee xayiraadaha safarka - oo ay ku jiraan siyaasadaha fogeynta bulshada iyo xeerarka joojinta duulimaadka - dhammaadka Abriil, guud ahaan booqdayaasha gaarka ah iyo dalabaadka alaabada (labadaba kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ah) ayaa ku dhawaad ​​labanlaaban tirooyinka bishii Febraayo, markii Hong Kong si weyn loo garaacay. by COVID-19.
Intaa waxaa dheer, bisha Maajo, dadka aan deganayn waxay awoodaan inay galaan Hong Kong markii ugu horeysay muddo laba sano ah, iyadoo dalxiiska soo galitaanka la filayo inuu kordho, marka lagu daro kor u kaca joogitaannada.
Xukuumadda Hong Kong waxay sidoo kale raadinaysaa inay dhiirigeliso oo ay kor u qaado isticmaalka maxalliga ah guud ahaan, iyo sidoo kale qaybta socdaalka, waxayna soo saartay wareeg cusub oo foojarrada isticmaalka ah bishii Abriil.
Kuuriyada Koonfureed: Duulimaadyada Caalamiga ah ee Hogaaminaya Soo kabashada
Kuuriyada Koofureed ayaa dib loo furay 1-dii Abriil, iyadoo socotada si buuxda loo tallaalay ay hadda awood u leeyihiin inay si xor ah u soo galaan oo ay ugu guuraan gudaha waddanka iyada oo aan wax tallaabo ah laga qaadin. Si sax ah, waajibaadka maaskaro dibadda ayaa sidoo kale kor loo qaadayaa Maajo, iyadoo duullimaadyada caalamiga ah la saadaaliyay inay sidoo kale kordhi doonaan. Wadanku waxa uu qorshaynayaa in uu dib u bilaabo ku dhawaad ​​kala badh tiradii duulimaadyada ka hor masiibada marka la gaadho dhamaadka sanadka.
FlightGlobal waxay soo warisay 420 duulimaad caalami ah toddobaadle ah oo dalka soo galay bishii Abriil, wax ka yar 9% heerarkii masiibada ka hor.
Xogta ayaa sidoo kale caddaynaysa in duullimaadyadu ay horseed u yihiin soo kabashada suuqa, iyada oo 383% korodhka sannadlaha ah ee ballansashada duulimaadka ee Abriil iyo korodh dheeraad ah oo ah 39% isla muddadaas March. Tirada isticmaalayaasha daawashada alaabada duulimaadka tan iyo bishii Maarso 1 ayaa sidoo kale kordhay ku dhawaad ​​150% sanad kasto.
Maaddaama waddanku sii wado fududaynta xannibaadaha safarka caalamiga ah, waxaan sidoo kale aragnay baahida safarka caalamiga ah ee kor u kaca ee goobta shirkadda ee Kuuriya. Booqashada duullimaadyada dibadda ayaa saddex jibaarmay bishii Abriil, marka la barbar dhigo Febraayo; iyo ballan-qaadyada hoteellada dibedda ayaa sidoo kale koray, 60% iyo 175% bilihii Maarso iyo Abriil siday u kala horreeyaan, marka la barbardhigo Febraayo.
Marka la eego meelaha loo aado dibedda, duulimaadyada caalamiga ah ee ugu caansan Kuuriya waxay ahaayeen Vietnam, Filibiin, US, Thailand iyo Indonesia, oo leh magaalooyin ay ka mid yihiin Ho Chi Minh City, Manila, Hanoi, Bangkok iyo Da Nang oo ku jira shanta ugu sareysa ee bixitaan. meelaha ay u safraan Kuuriya.
Vietnam: Suuq Dalxiiska Gudaha oo Xoog leh oo ay xoojiyaan Duulimaadyada Caalamiga ah
Vietnam waxa ay si buuxda dib ugu furtay xuduudaheeda socdaalayaasha caalamiga ah laga bilaabo March 15. Natiijo ahaan, waddanku waxa uu arkay dib u soo kabashada dalxiiska, iyada oo booqdayaasha caalamiga ah ee Vietnam bishii Abriil ay gaadheen 101,400 oo yimid, in ka badan shan jeer ka badan isla muddadaas sannadkii hore. Hamiga safarka gudaha ayaa sidoo kale kor u kacay. Xogta ayaa muujineysa in buundooyinka hoteellada gudaha ee waddanku ay kor u kaceen 247% sannad kasta marka loo eego 2021.
Diiwaangelinta duulimaadyada caalamiga ah ayaa sidoo kale la arkay koror muuqda iyadoo ay ugu wacan tahay fududeynta xannibaadaha, iyadoo tirooyinka 2022 ay muujinayaan kor u kaca 265% ee tirooyinka laga soo bilaabo 2021. In kasta oo booqdayaashu ay weli tahay inay helaan natiijada baaritaanka COVID-19 ee taban ka hor inta aysan dhoofin, 15-maalmood fiisaha ayaa diyaar u ah imaatinka 13 wadan oo muhiim ah (oo ay ku jiraan Japan, South Korea, France, Spain iyo UK) kuwaas oo rajeynaya inay sii kiciyaan soo kabashada.
Sannadka 2022, duulimaadyada ugu caansan ee taga Vietnam waxay ka yimaadaan Kuuriyada Koonfureed, Thailand, Japan, Singapore iyo Malaysia.
Xogta ku saabsan heerka hadda ee suuqa Aasiya waa hubaal dhiirigelin leh, iyadoo xiisaha iyo ballan-qaadyada sii kordhaya iyo kalsoonida macaamiisha oo kor u kacda. Marka xagaaga soo dhawaado, warbixin ka timid Skyscanner, sidoo kale astaan-hoosaadka Kooxda Trip.com, waxay soo jeedinaysaa in safarro badan oo caalami ah ay rabaan inay wax badan kharash gareeyaan oo ay aad u sii safraan si ay uga soo kabtaan socdaal la'aanta inta lagu jiro masiibada, iyadoo qaar badan ay ka fikirayaan ka hor xilli sare. iyo booqashada gobolka APAC ee fasaxyada.
Isbahaysiga Safarka Baasifiga Aasiya Spain Thailand Dalxiiska Trip.com
Faafida COVID Waxay u horseedaa Jahawareer Qiimaha Hoteelka
Maamulka Amniga Gaadiidka Cirka ee Kanada ayaa jirsaday 20
Waa maxay sababta ay dad badan oo Maraykan ah wali u xidhan yihiin waji-xidhka?
Mareykanka ayaa hadda ka xiri doona hawada sare ee Ruushka
Jawaabta Dalxiiska Prague ee Qaxootiga Ukraine
Virginia's Mountain Lake Lodge waxay magacawday Heidi Stone...
27,000 oo dalxiisayaal Ruush ah ayaa ku xayiran dibadda ka dib markii ay duulimaad cusub ...
Labada Wheeler Aftermarket Agabka & Alaabada la isticmaali karo...
Wadashaqeyn cusub oo tijaabo caafimaad ah oo loogu talagalay daawaynta...
Suuqa Aysiidhiyaha Cunnada ee Fursadaha Sharafta leh...
Suuqa Ganacsiga Kirada ee IBC 2022 Heerka Horumarineed...
Dareenka Tareenka ee Ruushka ayaa go'aan ku gaaray cillad ka dib markii uu waayay curaarta...
Ajandaha cusub ee Jaamacadda Bournemouth ee Dalxiiska...
Khamriga Bordeaux: Pivot dadka ilaa ciidda
Cusbooneysiin cusub oo ku saabsan daaweynta wax ku oolka leh ee ka dhanka ah gardarrada
Dalxiiska Vanuatu waayo-aragnimo cusub oo nolosha ah si loo bilaabo...
Dib u soo celinta Cunnada: Abuurka poppy oo ay sababto Salmonella
Bukaanka ugu horreeya ee lagu daweeyay kooxda 2 SARTATE™...